Tilmaamaha Rakibaadda MediaLight Mk2 - Nalalka Midabtakoorka ee MediaLight
Tilmaamaha Rakibaadda MediaLight Mk2
Fadlan kaliya ku rakib hal dimmer midkiiba MediaLight ama LX1. Haddii aad kudareyso Wi-Fi dimmer-kaaga Mk2 Flex, sidoo kale ha u isticmaalin dimmer-ka kale ee la yimid Mk2 Flex. Si sax ah uma shaqeyn doonaan ilaa mid laga saaro.
Qalabka nadiifka ah ee nadiifka ah ee 'MediaLight Mk2' waa kuwa haga kuleylka iyo korantada, laakiin sidoo kale aad bay u jilicsan yihiin oo si fudud ayey u jeexi karaan.
Fadlan ka tag geesaha xoogaa dabacsan oo ha hoos u riixin. Geesaha xitaa wey yara dhegi karaan. Tani waa caadi mana jirto wax khatar ah oo goosasho ah. Ma keeni doono hooska. Cadaadiska geesaha ayaa sababi kara iyaga, mararka qaarkood, inay jeexaan.
Haddii qalabkaaga 'MediaLight' uu ku dhegan yahay TV-ga, waxaa jirta fursad aad u fiican oo uu ku jeexi karo haddii aad isku daydo inaad ka saarto. Xabagta waxay sameysaa xirmo aad u sareeya. Tan waxaa lagu daboolay damaanad.
Iska yaree halista waxyeello u geysan karto qalabkaaga cusub ee 'MediaLight'.⚠️
Fadlan aqri tilmaantan rakibida oo daawo fiidiyowga rakibida ee gaagaaban sanado badan oo raaxo leh.
* Dabcan, haddii MediaLight aad waligaa jabto inta lagu guda jiro rakibidda waxay ku hoos jirtaa damaanadda 5-sano ee MediaLight, laakiin waa inaad sugtaa dhowr maalmood beddel ka hor intaadan rakibin
The wareegyada guduudka sawirka kore ku muuji QODOBADA FLEX ee aad si aamin ah ugu laaban karto xariiqa 90 ° dhinac kasta. Meel kasta oo jilicsan ayaa u foorarsan karta labada dhinacba. Looma baahna in geesaha la jajabiyo. (Waxay kuxirantahay xaddiga xoogga loo isticmaalay in lagu cadaadiyo geesaha, waad jeexi kartaa xarigga PCB ee naxaasta ah).
Haddii aad u baahan tahay inaad sameysid wax ka badan 90 ° leexasho, waa inaad ka qorsheeysaa leexashada dhowr dhibic oo jilicsan. Si kale haddii loo dhigo, wareegga 180 ° waa in loo qaybiyo inta u dhexeysa laba 90 ° leexo.
Looma baahna in geesaha la simo markii aad xagal rogto, laakiin haddii aadan iska caabin karin rabitaanka, kaliya ha cadaadinin.
Waayahay, iyada oo taasi jirto, fadlan eeg fiidiyowga rakibidda!
Dhibaatooyin kaa haysta miyirkaaga fog? Hubso inaad daawato fiidiyowgan si dhaqso leh loo sameeyay si laguu tuso sida loo hubiyo khadka saxda ah ee goobta.
MediaLight Mk2 wuxuu umuuqdaa mid aad uga duwan qaababkeenii hore. Waxaa dib loo naqshadeeyay. Kahor intaanan guda galin rakibida, waxaan rabaa inaan dulmar ku sameeyo isbedelada oo aan sharaxo sababta aan u sameynay.
Marka hore, waxaad ogaan doontaa in xargaha uu adeegsanayo qaab zigzag ah. Tan waxaa loo sameeyay maxaa yeelay, halkii ay ka ahaan lahaayeen cutubyo duug ah oo ku tiirsan xariiqyo badan oo dhammaantood ku xiran isla qeybiye 4-waddo ah, waxaan u hagaajinnay xariiqa inuu u ordo sidii gabal keliya oo qiyaastii ah 3 ama 4 dhinac, ama ku-leexsan-U dhinaca gadaasha muuqaalka.
Si ka duwan sidii hore ee loo yaqaan 'MediaLight Flex', ma jirto khiyaamo loo rogo xagal. Faleebada si fudud ayey u rogi doontaa geesaha, iska hubso inaadan dillaacin qaybaha jilicsan ee ku yaal xariijinta. Kaliya foorari halka ay ku taal FLEX POINT oo ku calaamadeysan astaanta MediaLight "M" ama "DC5V".
1) Unugyada Mk2 waxaa ku jira oo keliya .5m (nus mitir) xarig dheeri ah. Taasi waa quruxsan tahay, sax? Waxaan tan u samaynay inaan noqonno bakhayl - laakiin MAYA lacag.
Waan bakhaylaynaa KORONTADA si aan u socodsiin karno dherer dhaadheer oo hoos udhaca danab ka yar noocyadii hore Xaraashyadii hore ee Quad ayaa loo kala qeybiyey 4 xarig si loogu kala qaado hoos u dhaca danabku si siman oo ka mid ah 4 xariijimo, laakiin tani waxay keentay dhalaal dhalaalaya ugu badnaan iyo jiir silig jiir ah. Mk2 waxaa loo fududeeyey rakibid badan oo fudud.
Waxaan u adeegsaneynaa silig naxaas saafi ah si loo yareeyo iska caabinta falka, laakiin maxaa yeelay Mk2 Flex waxaa loogu talagalay inuu ka baxo 5v USB power, yareynta dhererka siligga wuxuu kordhiyaa iftiinka ugu badan ee xariga ilaa 15%. Isku dhafan fiilada fidinta, cabbirka iyo badhanka, adiga weli waxay leeyihiin 4 fuudh (1.2 mitir) wadarta silig. Iyadoo aan lahayn kordhinta .5, wadarta dhererka siligga, oo ay kujiraan beddelka iyo cabirku waa 2.4 cagood. Haddii aad u baahan tahay inaad socodsiiso koronto masaafo aad u weyn, sida ugu wanaagsan ee aad ku sameyn karto waa iyada oo loo marayo 110v ama 220v (waxay kuxirantahay gobolkaaga) xadhig dheeri ah
Weligaa ogow sababta fiilooyinka USB ee taleefankaaga aysan uga dhaafin 5m (badanaa, aad ayey uga gaabiyeen, ugama dheereen 10 fuudh / 3m). Sababtoo ah inaadan awoodin inaad awood u yeelatid USB awood aad u fog adigoon hoos u dhicin korantada. Shirkadda korontadu sidoo kale guriga uma maamusho xadhig kordhin 110v ah. Waxaad ubaahantahay khadad koronto sare si aad koronto uga hesho warshada korontada una soo qaado gurigaaga.
Hagaag, isla sidaas ayaa loo adeegsadaa adiga MediaLight Mk2.
Haddii darbigaaga uu ka baxo 20 fuudh, waxaad ordi kartaa 110v ama 220v xadhig dheeri ah adigoon luminayn danab nalalkaaga iyo TV-gaaga. Haddii kale, waxaa fiican inaad si toos ah uga shubato TV-ga ama fiilooyinka korontada ku dhow. Dayax madoobaadka wali waxaa kujira fidin 4ft ah, maxaa yeelay Eclipse waa mid aad u gaaban oo si dhib yar u jiidaya wax awood ah (ka yar 300mA, hadii aad isweydiiso).
Chips-yada cusub ee loo yaqaan 'Mk2 chips' waa kuwo aad waxtar u leh (sameynta dheer, dhalaalaya 5v strips suurto gal ah), laakiin waxaan u baahanahay inaan yareyno iska caabinta u dhaxeysa fiilada USB iyo xariga si loo gaaro dhererkan.
Haddii aad rabto laydh aad u dhalaalaya, waxaan bixinaa 12v iyo 24v ikhtiyaarro (iyo 800 nal guluubka), laakiin korantada eexashada korontada ee TV-ga waxay ku saabsan tahay sahlanaan, fiilooyin yar iyo (mararka qaar / kiisaska qaarkood) in laydhku shito oo la damiyo TV-ga. (Sony Bravia tan ugama dambeyso sifiican uma sameyso. Way damineysaa laakiin ma garanayo sida loo damiyo oo waxay u shidantaa oo u waalataa sida waalan ee TV-ga uu daminayo) Waxaan kuu soo bandhignay 12v xarig sanado, laakiin uma baahnid ama ma doonaysid in nalalka eexda ay noqdaan kuwo dhalaalaya. Taasi waa sababta aan ugu darno dimmer. Xitaa iyada oo leh 5v USB, laydhadhku aad ayey u dhalaalayaan iyaga oo aan isticmaalin cabir. Meesha korantada sare ay soo gasho waa marka aad rabto inaad u isticmaasho xargaha sida laydh lahjad dheer oo ku wareegsan qol.
2) Xadhigaha cusubi waxay umuuqdaan lacag, uma eka wax naxaas ah, laakiin waa naxaas lagu dahaadhay isku-dhafan.
Dhamaan xargaha PCB-ga waa naxaas saafi ah, laakiin si loo kordhiyo cimriga xariga, si looga hortago qiijiyeynta iyo in la wanaajiyo tayada isku xirnaanta udhaxeysa dusha sare ee LED-yada iyo qeybta PCB, waxay ku dahaadhan yihiin isugeyn alloy ah.
Tani waa waxa ay u egyihiin kahor intaysan quusin oo goyn kahor iyo inta aan laydhadhka iyo kuwa wax diidaya lagu iibiyo:
Nidaamkan u hoggaansamida RoHS wuxuu daaha ka qaadaa naxaas leh iskudhis ka kooban zinc, nikkel iyo qasacad. Xoqidda dahaadhkani ma aha wax dhibaato ah, ee waa lakabka u dhexeeya laydhadhka iyo xargaha (hoosta LED-ka halka aanad ku arki karin) taas ayaa ugu muhiimsan.
Faa'iido dheeri ah ayaa ku jirta quusidda alloy. Waa midab muuqaal ahaan-dhex-dhexaad ka ah naxaaska soo shaac baxay. Si kastaba ha noqotee, been sheegi maayo. Farqiga ayaa ah mid la iska indhatiri karo. Ma beddeleyso heerkulka midabka ee isku xiran wax badan - oo ku saabsan 20K. Isticmaalka PCB-ga madow waxay saameyn aad u weyn ku leedahay heerkulka midabka ugu dambeeya. Waxaan tijaabinay xargaha cad oo keenay isbedel dhan 200K.
Waxaa jira isbeddelo kale.
Waxaan ka soo wareegnay Chips-kii hore MediaLight Single Strip, Flex iyo Quad moodellada loo yaqaan 'Colorgrade Mk2 chip' (2835 SMD oo leh iskudhaf fosfooras ah). CRI-ga ayaa laga dhigay 95 Ra halka haatan laga dhigay ≥ 98 Ra. TLCI wuxuu ka kordhay 95 ilaa 99. Waa, si hufan, iftiin qurux badan.
Waxaan ka shaqeyneynay qalabkan tan iyo markii la sii daayay MediaLight Pro oo jajabku wuxuu bixiyaa heer dhexdhexaad ah oo heer sare ah 'MediaLight Pro' iyo 'CRI / TLCI' oo aad u sarreeya qiime ka hooseeya-halkii mitir marka loo eego noocayagii hore ee 'MediaLight version 1'.
OK, ku filan sharaxaadda naqshadeynta (hadda). Waxaad rabtaa inaad ogaato sida loo rakibo sheygan.
Maxaa ku jira sanduuqa (loogu talagalay Mk2 Flex 2m-6m)
1) Daar / demi toggle biiro USB lab ah
2) MediaLight Mk2 Flex strip light
3) Dimmer leh qaataha infraredka (fog ma shaqeyn doono isagoon isku xireynin bareeraha)
4) Xakamaynta fog
5) .5m xadhig dheeri ah. Kaliya isticmaal haddii aad u baahato. Haddii aad ka shaqeyneyso dekedda USB-ga TV-ga, malaha uma baahnid, waxaadna isticmaali doontaa awood yar haddii aad ka tagto.
6) Adapter AC oo la ogolaaday (Waqooyiga Ameerika oo kaliya).
7) Qeybaha siligga lagu maro. U adeegso kuwan si aad u hagaajiso fiilooyinka iyo / ama inaad gacan ka geysatid sidii loo hagaajin lahaa qalabka wax lagu qoro ee IR. Qaybaha waaweyn ee 'MediaLight Mk2' waxaa ku jira googoyn badan.
Markaad rakibayso qalabka cusub ee 'MediaLight Mk2' shaashaddaada, haddii aad u socotid ku dhowaad 3 ama 4 dhinac, tusaale ahaan, marka muuqaalkaagu uu saaran yahay derbiga korkiisa:
1) Ka cabi 2 inji oo ku yaal cidhifka muujinta (haddii aadan haysan taliye ku habboon, leyliga "MediaLight" ee dhinacyada oo dhan ee sanduuqa Mk2 Flex- oo aan ku jirin casaanka, cagaarka & buluuga "M" waa wax yar in ka badan 2 inji dherer). Sanduuqa sidoo kale waxyar ayuu ka yar yahay 2 inji dhumucdiis (qiyaastii 1 3/4 inji).
2) Bilow inaad kor ugu kacdo dhanka shaashadda dhinaca ugu dhaw dekedda USB, laga bilaabo AWOOD (bareesin) DHAMMAAD xarigga. Haddii aad ku xirmeyso dekedda USB-ga TV-ga, malaha uma baahnid inaad isticmaasho kordhinta .5m ee aan ku darnay. U daa (haddii aad awoodid) rakibidda nadiif ah.
Tani waxay fududeyn doontaa in laga jaro wixii dherer ah ee dheeri ah markaad dhammayso. Haddii muuqaalkaagu aanu lahayn dekedda USB-ga, bilow inaad kor ugu kacdo muuqaalka dhinaca ugu dhow isha korontada, ha ahaato xarig koronto ama sanduuqa bannaanka sida laga helay bandhigyada qaarkood. Haddii ay si toos ah ugu taal xarunta, anigu garan maayo waxaan kuu sheego. Dhig qadaadiic ah. :)
By the way, haddii aad si shil ah u gooyso dhamaadka korontada, waxaan kuu soo diri doonaa bedel bilaash ah, laakiin waxaan u maleyneynaa inaan si qosol leh u qosli doonno. Waxay umuuqataa inay badanaa dhacdo dadka aadka uquruxda badan ee kujira hay'adaha karaamada leh, markaa waxaan u maleyneynaa inay calaamad u tahay sirdoonka aad u sareeya, laakiin waxay dhacdaa dhowr jeer sanadkiiba walina waan ku qosleynaa.
Nalalkaagu waxay ku hoos jiraan damaanad qaadka hogaaminta warshadaha muddo 5 sano ah waxaanan daboolaynaa rakibidda qalabka, sidaa darteed ha u adkeynin wax badan. Haddii aad khalkhal geliso MediaLight Mk2, nala soo xiriir.
3) Haddii aad u baahan tahay inaad ka goyso dherer dheeri ah xarig, waxaad ku gooyn kartaa qadka cad ee ka tallaabaya xiriir kasta oo xiriir ah. Ku jar khadka hoose:
Taasi waa inay dabooshaa wax walba oo loogu talagalay rakibidda darbiga badankood.
Tilmaamaha soo socda "rogay-U" ayaa lagu dabaqayaa marka la isticmaalayo xarigga 2m (ama ka yar) si loo muujiyo istaagga. Si kale haddii loo dhigo, marka aadan isku deyin inaad ku wareegto 3 gees:
Tilmaamahan ayaa shaqeyn doona inta aad ka dalbaneysid cabirka saxda ah ee muujintaada shaxdayada qiyaasta.
Waa kuwan fiidiyow ku meelgaar ah oo aan sameeyay markii aan ku burburayay hudheel intii lagu jiray dayax madoobaadkii dhawaa ee la xiriira duufaanka (had iyo jeer ku safraan nalalka eexda;)). Waxaan ku bedelaynaa bisha Sebtember wax joogto ah, laakiin waa mid gaaban oo macaan. Xaaladdan oo kale, waa 1m oo xarig ah oo ku taal muujinta 42 inji, laakiin tani waxay u shaqeysaa 2m ama 3m oo xarig ah oo ka weyn.
Sideen ku rakibaa MediaLight Mk2 marka muuqaalkaygu taagan yahay?
1) Meel ku ogow bartamaha xariijimaha adiga oo dhigaya bilowga qeybta hore ee silsiladda oo raadinaya barta dhexe. Waxa kale oo aad tirin kartaa Laydhka. Waxaa jira 30 Laydh halkii mitir. Haddii xariggu dhererkiisu yahay 2 mitir, xiriirada u dhexeeya 30-ka iyo 31-aad LED-ka ayaa ah barta dhexe.
2) Meel ku ogow bartamaha TV-ga gadaashiisa shaashada. Waxaad ku calaamadeyn kartaa bartamaha gabal cajalad wejiga lagu duugo ama xitaa ku calaamadee nuurad ama xitaa, si tartiib ah, oo masax masax qalin ah. Cabir ku dhowaad 1/3 ee jidka kore xagga muujinta. Tani ma aha inay ahaato mid sax ah! Tani "1/3 ee habka hoos loo xukumo" oo keliya khuseysaa marka la isticmaalayo xarig ka gaaban 3 dhinac ee muuqaalka!
Haddii aad haysatid 3m oo ah 65 "bandhig, raac tilmaamaha caadiga ah ee 2" laga bilaabo geeska bandhigga dhinacyada oo dhan.
Fiiro gaar ah: Haddii dhinacyada muuqaalkaagu qaloocan yihiin, waa caadi in laydhadhka waxoogaa ka sii durugsan geeska - ama ha ahaato meesha korontada gadaal kaga taal ay la mid tahay gidaarka, ama aad uga fog cirifka si looga hortago safka tooska oo leh laydhka meesha aad ka daawan lahayd
3) Ku bilaw inaad ku dhejiso bartamaha xariijimaha bartamaha muujinta oo aad jidkaaga u marto dhinacyada muujinta. Way ku caawin kartaa in la jaro taageerada balaastigga cas ee barta bartamaha. Waxaad ku sameyn kartaa tan adiga oo si tartiib ah uga soo jiidaya xariiqa.
Markaad isticmaaleyso rogaalka-U, 1/2 ee wadarta LED-yada xariijimaha waa inay ka kooban yihiin qeybta hoose ee 1/3 xagga sare. Marka, haddii ay tahay xarig 2m ah, qaybta jiifka waa inay ahaataa ugu yaraan 30 Laydh (1 mitir) oo dhan. Waa in ay jiraan inta soo hartay ~ 15 LEDs dhinac kasta. Hadday tahay 3 mitir xarig, waa inuu jiraa 46 Laydh toosan oo toos ah iyo 22 Laydh oo hoos u dhacaya dhinac kasta.
Telefishinka taagan, nalalka eex waxaa caadi ahaan lagu dhejiyaa calaamadda 1/3 maxaa yeelay runtii ma dooneysid inaad shido istaagga TV-ga, cid kasta oo ka hadasha kanaalka ama baararka dhawaaqa, ama tzotchkes kale oo laga yaabo inay ku fariistaan ​​qunsulka TV-ga. .
Haddii muuqaalkaagu leeyahay dusha sare oo aan sinnayn oo dhabarka ah (ie LG ama Panasonic OLED "humps,") waxaa fiican inaad ka tagto farqiga hawada oo aad ku fidiso farqigaas xagal 45 ° ah halkii aad ka raaci lahayd dusha shaashadda. (Waan ogahay inay u egtahay in sawirkan uu sameeyay 12 jir).
Haddii aad raacdo mowduucyo ka sii adag, halkaasoo leerarka LED-ka ay iska soo horjeedaan midba midka kale, waxaad ku dambayn kartaa "fanning" ama si qoto dheer u eegtaa jagooyinkaas. Saameyn kuma yeelaneyso waxtarka, laakiin halo uma eekaan doonto sida ugufiican ee ay kari karto. Tani waxay sidoo kale halo quruxsan oo joogto ah ku haysaa fuulitaanka darbiga. Haddii aad darbiga ka sii fogtahay, faanku uma badna sidii hore.
Haddii aad akhrinaysid tan oo aad si buuxda u wareersan tahay, fadlan ha murugoon. Ila soo xiriir ila sheekaysigayaga (midigta hoose ee boggan). Waxaan ku dari doonaa sawirro iyo fiidiyowyo dheeri ah maalmaha soo socda. Waxaan kuugu soo hagaajin doonnaa MediaLight Mk2-kaaga oo soconaya waqti aan fogeyn.